म्याट कालो4इंच बाथरूम नल केन्द्र
घर / बाथरूमको नल / डबल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW सेन्टरसेट बाथरूमको नल ड्रेन असेंबली म्याट कालोसँग
ड्रेभ असेंबली म्याट ब्ल्याकका साथ वाह वाह सेन्टरसेट बाथरूमको नल
रेटेड 4.855बाहिर आधारित 20 मूल्यांकन ग्राहक
बाथरूम नल म्याट कालो २ ह्यान्डलले कार्यक्षमता र १ मा समकालीन डिजाइन प्रदान गर्दछ।2बर्षे वारेन्टीको साथ। अब हाम्रो बाथरूम नल मैट कालो 1 ह्यान्डल खरीद गर्नुहोस्!
2321400B स्थापना निर्देशन
शौचालय कागज धारक वाल माउन्ट कालो
बाथरूम नल मैट कालो २ ह्यान्डलs 2321400B
धेरै व्यक्तिले चाँदी वा क्रोम बाथरूम नलको लागि छनौट गरेमा, तपाईं म्याट कालो बाथरूम नलको साथ विशाल फेशन स्टेटमेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यस र color्गले मात्र तपाईंको बाथरूमलाई एक रमणीय र अनन्य रूप दिन्छ, म्याट कालो रंग अझै सूक्ष्म र क्लासिक पनि छ। संयोगवश मेट ब्ल्याक समकालीन क्लासिक रंग बन्न गएको छैन जब यो बाथरूम डिजाइनको कुरा आउँदछ। म्याट कालो एक प्रवृत्ति हो जुन द्रुत रूपमा चाँडै फुल्दैन। बाथरूमको नलको म्याट ब्ल्याक फिनाले कुनै पनि बाथरूममा आधुनिक टच दिन सक्छ।
एक तथ्य यो बेवास्ता गर्न सक्छ कि बाथरूम faucets कुनै पनि बाथरूम शैली को बारे मा सबै भन्दा महत्वपूर्ण सुविधाहरु को एक हो। जे होस् बाथरुमको सानो सानो छ, मान्छेहरु बाथरूम faucets मा ध्यान केन्द्रित गर्न को रूप मा तिनीहरूको दृश्य स्वतः यो केन्द्र बिन्दु मा आकर्षित हुन्छ। त्यसैले बाथरूम faucets बनाउन वा कुनै स्नानगृह तोड्न सक्छन्। बाथरूम faucets बाथरूम उत्थान गर्न क्षमता छ। एक साधारण वा न्यूनतम बाथरूमले स्टाइलिश बाथरूम faucets को साथ एक ठूलो अपलिफ्ट प्राप्त गर्न सक्दछ। यस बाथरूमको नक्कल WOWOW को स्टाइलिश क्लासिक रेट्रो डिजाइन तपाइँको बाथरूम एकै पटकमा अधिक फेसनशील बनाउँछ। बाथरूमको नल म्याट कालो २ व्वाल्स WOWOW यी बाथरूम faucets मध्ये एक हो जसले तपाईको बाथरूम सजावटलाई वास्तवमा परिवर्तन गर्न सक्दछ।
2 ह्यान्डलहरूको साथ मैट कालो बाथरूम नल
शैली एक चीज हो, तर कार्यक्षमता अझ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। दैनिक आधारमा तपाइँ तपाइँको बाथरूम धेरै पटक प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाइँ तपाइँको बाथरूमले तपाइँको दैनिक तालिकालाई समर्थन गर्ने ढ in्गले सेवा दिन चाहनुहुन्छ। यो एक स्नान र नुहाउने टबको रूपमा कार्यहरूको लागि कुनै श a्का बिना गणना गर्दछ। तर तपाई सायद तपाईको बाथरूमको सिink तपाईको बाथरूमको अन्य सुविधाहरु भन्दा बढी प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईंले आफ्नो बाथरूमको यस पक्षमा अझ बढी ध्यान खर्च गर्नुपर्दछ। सुविधाजनक बाथरूम सि sक बाहेक, बाथरूमको नलले तपाईंलाई चाहिने सबै प्रकार्यहरू सेट गर्दछ।
बाथरूमको नल म्याट कालो २ हन्डल WOWOW ले ठूलो पानी अनुभवको ग्यारेन्टी गर्दछ। यो म्याट कालो inch इन्चको बाथरूम نلमा २ ह्यान्डलहरू छन्। यी ह्यान्डलहरूको साथ तपाईं पानीको तापक्रम समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको आवश्यकताको लागि बिना चरणको गति। उच्च चापको टाउकोले तपाइँलाई आरामसँग तपाइँको हात धुनुहोस् वा तपाइँको अनुहार कुल्नका लागि टाउको र तपाइँको बाथरूम सिंकको बीच पर्याप्त ठाउँ दिन्छ। दूरी2इन्च छ र पर्याप्त ठाउँ प्रदान गर्दछ। नतीजाको रूपमा, तपाईंले सीमित स्थानसँग कम चाप बाथरूमको नलसँग संघर्ष गर्नुपर्दैन।
सबै भन्दा माथि, बाथरूमको नल मैट कालो २ का WOWOW को घुमाउने नोजलले सुविधाजनक प्रयोगको लागि-2० डिग्री रोटेशन प्रदान गर्दछ। बाथरूमको नल म्याट कालो २ ह्यान्डलहरू समान म्याट कालो रंगमा लिफ्ट रड ड्रेनको साथ आउँदछ जुन तपाईंको बाथरूम सिink्कसँग एकता सिर्जना गर्दछ। यस बाथरूम नलको पछाडि एकीकृत ह्यान्डलको साथ यस नाली असम्ब्ली खोल्न र बन्द गर्न सजिलो छ।
प्रथम श्रेणी बाथरूम नल मैट कालो २ ह्यान्डल
यसको समकालीन र बोल्ड डिजाइनहरू बाहेक, WOWOW मुख्य रूपमा यसको उच्च गुणस्तरको लागि परिचित छ। जब त्यसले ड्राइंग बोर्डबाट यी गुणस्तरको मानकलाई उनीहरूको अल्ट्रा-आधुनिक कारखानामा धक्का दिन्छ, यस बाथरूमको नलको प्रत्येक सानो विवरण अधिकतममा अनुकूलन गरिएको छ। यसले तपाईंलाई उच्च गुणस्तरको बाथरूम नल दिन्छ जुन यसको उद्देश्य राम्रोसँग प्रयोग गर्दछ र लामो जीवन सहनशीलताको ग्यारेन्टी दिन्छ।
WOWOW को बाथरूमको नल मैट कालो २ ह्यान्डलको टिकाऊ खुट्टा ठोस ब्रास सामग्रीबाट बनेको हुन्छ किनकि यसले इष्टतम प्रदर्शन र सबैभन्दा लामो समयसम्म धैर्यताको ग्यारेन्टी दिन्छ। साथै निर्माण ठोस तामाले बनेको छ र जिंक मिश्रको साथ समाप्त भयो। तपाईंले यी सामग्रीहरूको कारण जंग सम्बन्धी मुद्दाको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। यस बाहेक, यो बाथरूमको नल तपाईको परिवारलाई अधिकतम सुरक्षा गर्न सिसा-रहित छ। तपाईले यो गुणको फरक तुरून्त महसुस गर्नुहुन्छ तपाईले यसलाई समातेर। यो कालो बाथरूम नल म्याट कालो २ ह्यान्डल दाग-प्रतिरोधी पनि हो। त्यसकारण यसलाई कायम राख्न सजिलो छ। जब तपाई एक उच्च गुणस्तरको बाथरूम नल किन्नुहुन्छ भने त्यो पाउनुहुन्छ।
आर्थिक बाथरूम नल मैट कालो २ ह्यान्डल
म्याट कालो यस डिजाइनर बाथरूम नल भित्र प्रीमियम सिरेमिक डिस्क पानी सहज प्रवाह र ड्रिप मुक्त बनाउँछ। यस बाथरूमको टाउकोमा एबीएस एरेटर छ। यस नवीन पक्षको साथ तपाईं आफ्नो पानी खपत बचत गर्न सक्नुहुनेछ र साथै पानी संरक्षणमा मद्दत गर्नुहोस्। NSF- प्रमाणित भल्भ तपाईलाई अधिकतम आराम प्रदान गर्न सजीलो मोडिन्छ। उच्च गुणस्तरको कार्ट्रिज 500,000००,००० पानी चक्रमा परीक्षण गरिएको छ, र अझै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। र यो अझै किफायती मूल्यमा!
WOWOW को उत्पादन प्रक्रिया अत्यधिक मानकीकृत र स्वचालित भएकोले WOWOW ले उच्च आर्थिक मूल्यको बाथरूम नल म्याट कालो २ ह्यान्डलहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछ। कुशल र लागत-प्रभावी खरीद र सामग्रीको प्रयोगको साथ, WOWOW ले उत्पादन लागतमा ठूलो बचत गर्दछ। र अझै उच्च दृष्टि बाहिर उत्पादनको उच्च गुणवत्ता उत्पादन को प्रधान उद्देश्य हराए बिना। WOWOW ग्यारेन्टी गर्दछ कि तपाईं समान गुणस्तरको कुनै पनि बाथरूम नल पाउन सक्नुहुन्न जुन हामी प्रस्ताव गर्छौं।
स्थापना गर्न सजिलो र मर्मत गर्न सजिलो
यो ह्यान्डल कालो सेन्सेट बाथरूम नल २ ह्यान्डलको साथ आफैं द्वारा कुनै पनि व्यावसायिक बिना स्थापित गर्न सजिलो छ। यस तरीकाले तपाईले यो बाथरूमको नल म्याट कालो २ स्थापना गरेर पनि बचत गर्न सक्नुहुनेछ। Inch इन्चको बाथरूम नल कुनै पनि-प्वाल माउन्ट गर्दछ। बाथरूमको नल म्याट कालो २ ह्यान्डलहरू केकको टुक्राहरू जडान गर्नका लागि सामानहरूको सेटको साथ आउँदछन्, पानीको ट्यूब, लिफ्ट रड ड्रेन र सजिलै स्थापनाको लागि डेक प्लेट सहित।
बाथरूमको नल म्याट कालो2WOWOW को ह्यान्डलको साथ तपाई बाथरूम नलको सुनिश्चित हुनुहुनेछ जुन सबै उद्योग मापदण्ड भन्दा बढी छ। तपाईं सजिलैसँग यो बाथरूमको नललाई कायम राख्न सक्षम हुनुहुनेछ, जबकि तपाईं आफ्नो औंलाहरूको कोमल स्पर्शले कठोर पानीको अवशेषहरू हटाउन सक्नुहुनेछ। किनकि यो बाथरूमको नल सफा गर्न सजिलो छ, तपाईं लामो समयसम्म यो नल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, उच्च गुणस्तरको पानी मापदण्डहरूको ग्यारेन्टी गर्दै। WOW केहि होइन यसका बाथरूमको नल म्याट कालो २ ह्यान्डलको प्रदर्शनको ग्यारेन्टी गर्न3बर्षे वारंटी अवधि प्रदान गर्दैन।
संक्षिप्तमा बाथरूम नल मैट कालो २ ह्यान्डलका फाइदाहरू:
। अद्वितीय म्याट कालो डिजाइन
 उच्च चाप नल पर्याप्त ठाउँ प्रदान गर्न
Oth महीन र ड्रिप-मुक्त टाउको
SKU: 2321400B विभाग: बाथरूमको नल, डबल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: निकास विधानसभा, दुई ह्याण्डल, पात्र सिink्क नल
6 x 2.2 x 7.5 इन्च
लिफ्ट रड ड्रेन
20 लागि समीक्षाएँ ड्रेभ असेंबली म्याट ब्ल्याकका साथ वाह वाह सेन्टरसेट बाथरूमको नल
B *** m मार्च 26, 2019
बिल्कुल यस नललाई माया गर्नुहोस्। तपाईं यो मूल्य हराउन सक्नुहुन्न र गुण उत्कृष्ट छ।
एम *** टी2020-03-20
*** s२०२०-०2020-२२ अमेरिका
सुन्दर ट्यापहरू। कडाईका साथ सिफारिस गर्नुहोस्। ठूलो मूल्य
जी *** ए2020-03-25
यस उत्पादनसँग वास्तवमै खुसी छ- यो एकदम राम्रो बनाएको र स्थापना गर्न सजिलो छ। निर्देशनहरू तारा-अगाडि छन्, तपाईंलाई आवश्यक सबै (माइनस रेन्चेज) प्याकेजमा आउँछ, र अन्तिम उत्पादन उत्कृष्ट देखिन्छ! मलाई मन पर्छ कसरी टाउको फुलेको छ!
राम्रो देखिन्छ, उत्तम कार्यहरू। फेरी प्राप्त हुन्छ।
एल *** ई2020-03-28
स्थापना गर्न धेरै चिकना सजिलो। त्यो faucent swivels कि प्रेम
मैले यो अर्डर गरें र यो स्नानगृहको नल कालो प्राप्त भयो जुन आधा घण्टा भित्र एकदम राम्रो अपग्रेड भयो। धन्यवाद।
राम्रो देखिएको र राम्रो मूल्य प्लम्बरले यो राम्रो ट्याप र मूल्यको लागि राम्रो गुण हो भने
जे *** ई2020-04-01
मेरो प्लम्बरले यो दुई ह्यान्डल नल स्थापना गर्न धेरै सजिलो थियो भने। पानीको दबाब धेरै राम्रो छ, विशेष गरी तातो पानी। मलाई मन पर्छ कि टाउकोले हिर्काउँदछ र म अब बाथरूममा चीजहरू भर्न सक्छु र मेरो उच्च चापको भान्सामा नलिन जानु पर्छ।
मलाई यो बाथरूमको नल दुईवटा ह्यान्डलहरू मन पर्छ जस्तो सुन्दर देखिन्छ महँगो देखिन्छ र स्थापना गर्न सजिलो थियो
भरपर्दो मात्रा र यस नलको आधुनिक डिजाइन। घरको बाथरूममा उत्तम फिट
बाथरूममा राम्रो अपडेट। पातलो डिजाइन, छिटो र सजिलो स्थापना गरियो।
सुरुमा म अलि गाह्रो (अनुभवको अभावको कारण) भएको थिएँ। मेरो प्लम्बरले मलाई मद्दत गर्यो। म सहमत छु कि यसको मूल्य आश्चर्यजनक छ, यो निश्चित रूपमा महँगो देखिन्छ र गुणवत्ता महान् छ। धेरै किन्न सिफारिश! !
जी *** के2020-04-15
मसँग एक हेडिम्यान ईन्स्टल मेरो थियो, तर उनले भने कि ती स्थापना गर्न सजिलो थियो। यसले तुरून्तै मेरो बाथरूमलाई आधुनिक मोडमा रूपान्तरण गर्यो जुन म खोज्दै थिए।
N *** ई2020-04-18
प्रिफेक्ट - यो बाथरूम नल राम्रो प्याक गरिएको छ र उच्च गुणवत्ता हो
वास्तवमै राम्रोसँग काम गर्दछ, नल धेरै आधुनिक देखिन्छ
यस नलको लुक र प्रदर्शन मन पराउनुहोस्। पानीको धार ठूलो छ! मलाई मन पर्छ कि नललाई छेउमा सारियो। पक्कै फेरि खरीद गर्नुहुन्छ!
पुरानो सिink्क र अग्लो उचाइको अपडेटहरूले पानी प्रवाहको लागि थप ठाउँ दिन्छ। पैसाको लागि ठूलो मूल्य!
यो नल स्थापना गर्न सजिलो छ। उपस्थिति पनि धेरै सुन्दर छ। सस्तो